बैचारिक र दूरदर्शी नेता शंकर पोख्रेल नै अबको महासचिव : केन्द्रीय सदस्य चौधरी - Rajmarg Online
बैचारिक र दूरदर्शी नेता शंकर पोख्रेल नै अबको महासचिव : केन्द्रीय सदस्य चौधरी
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वमा बहस सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्षपछिको शक्तिशाली पदका रुपमा रहेको महासचिवमा पार्टीका बैचारिक नेता शंकर पोख्रेलले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
पार्टीका बैचारिक नेताको परिचय बनाएका नेता पोख्रेललाई किन महासचिव बनाउनुपर्दछ ? भन्ने विषयमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नरुलाल चौधरीसँग सहकर्मी टीकाबहादुर बस्नेतले गरेकोे कुराकानीको सारसंक्षेप ।
दशौं महाधिवेशनको तयारी कहाँसम्म पुग्यो ?
नेकपा एमालेले दशौं महाधिवेशन भव्यरुपमा मनाउँदै छ । यही मंसिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुन लागेको महाधिवेशनलाई हामीले ऐतिहासिक बनाउँदैछौं । जसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । मञ्च व्यवस्थापन, पत्राचारलगायतका कामहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा नेतृत्व बहस तीब्र बनेको पाइन्छ । महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व स्थापित गर्छ त ?
यहाँले सान्दर्भिक जिज्ञासा राख्नुभयो । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो, बलियो र जनमुखी पार्टी एमालेको महाधिवेशनमा नेतृत्वको बहस हुनुलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन । एमाले बैचारिक पार्टी मात्रै होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भिन्दै छाप छोड्न सफल पार्टी हो । जसले मुलुकको विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सहि दिशा प्रदान गरिरहेको छ । यही कुरालाई आत्मसात गरी हामीले महाधिवेशनलाई बैचारिक नेतृत्व स्थापित गर्ने माध्यम बनाउँदैछौं ।
एमालेमा विचार भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रीत नेतृत्व दाबीको होडवाजी चलिरहेको छ भनिन्छ नि ?
यहाँले उठाएको कुरामा केही हदसम्म सत्यता छ । तर, सतप्रतिशत भने होइन । एमालेमा ठूलै नेपाहरुको पंति छ । जसकै कारण एमालेले यो तहको सफलता हासिल गरेको हो । तर, यस पटक हामीले मुख्य पदमा बैचारिक नेतृत्व स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौं । आम कार्यकर्ताहरुको मनोविज्ञान पनि यही रहेको पाएका छौं । वर्तमान परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्दै पार्टीलाई जिवन्त तुल्याउने नेतृत्व कार्यकर्ता पंतिले चाहिरहेको छ । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेतृत्वमा बैचारिक नेतालाई स्थापित गराउने गरी हामी लागिपरेका छौं ।
यहाँले पटक पटक बैचारिक नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो । बैचारिक भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको हो ?
एमाले विचारमा अडिएको पार्टी हो । जससँग विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मार्गनिर्देश गर्ने सिद्धान्त छ । जनताको बहुदलिय जनवाद जस्तो मार्गनिर्देशन सिद्धान्त छ । हामीले दशौं महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलिय जनवादका व्याख्याता शंकर पोखरेललाई पार्टीको महासचिवका रुपमा उभ्याउँदैछौं । पार्टीमा बैचारिक नेतृत्वको खडेरी भइरहँदा दशौं महाधिवेशनले उक्त अभावलाई पूर्ति गर्दैछ । यस पटकको महासचिवमा शंकर पोख्रेलको विकल्प नै छैन ।
किन महासचिवमा पोखरेल नै चाहियो ? अरु नेता बैचारिक नभएकै हुन् त ?
मैले यसपूर्व नै भनिसकेँ एमालेलाई बैचारिक नेतृत्वको अभाव रहँदै आएको छ । क. शंकर पोखरेल सक्षम नेतृत्व हो । आठौं महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले विवेक गुमाउँदा शंकर पोखरेललाई विजयी बनाउन सकिएन, तर उहाँ जहिले पनि पार्टीको केन्द्रमा नै हुनुभयो । पार्टी समस्यमा रहँदा समस्यामुक्त पार्टी बनाउन लागिपर्नुभयो । अझ भनौं एमाले क. शंकर पोखरेलकै विचारमा अगाडि बढिरहेको छ ।
यहाँले दाबी गरेजस्तो एमाले शंकर पोखरेलकै विचारमा अगाडि बढेको हो त ?
यो दाबी नभई सत्य हो । जुन बेला शंकर पोखरेल अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँले जबजलाई पार्टीको कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ भन्ने आवाज उठाउनुभयो र छैठौं महाधिवेशनले जबजलाई पार्टीको मार्गनिर्देश सिद्धान्त बनायो ।
त्यस्तै सातौं महाधिवेशनमा पार्टी संविधान सभामा जानुपर्दछ भन्ने आवाज उठाउनुभयो, अन्त्यमा पार्टीले संविधान सभा स्विकार गर्यो । यो तहको दूरदर्शी नेतालाई महासचिवका रुपमा देख्न एमालेका लाखौं कार्यकर्ताहरु हतारिएर बसेका छन् । महाधिवेशनले कार्यकर्ताको मनोभावनाको कदर गर्नेछ । यसमा दुई मत छैन ।
Posted in र्वार्ता
Prevबाघको छालासहित घोराहीबाट २ जना पक्राउ
Nextघोराहीमा आईटिएफ तेक्वान्दो प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता हुने